Adihevitra 10 Total Divas izay mety tsy fantatrao - Wwe
Adihevitra 10 Total Divas izay mety tsy fantatrao
Ny Total Divas dia manome ny mpankafy WWE fahitana ny fiainan'ireo Superstars vehivavy ao amin'ny orinasa ivelan'ny tarehin-tsoratra an-tserasera.
Hatramin'ny E! Nanomboka ny taona 2013 ny andian-tantara, vehivavy 15 mahery avy amin'ny WWE no naseho tamin'ny maha mpihetsiketsika azy, raha andiany iray kosa - Total Bellas, kintana Brie Bella sy Nikki Bella - no naseho voalohany tamin'ny taona 2016.
inona no sandan'ny pewdiepie net
Tahaka ny fahita matetika amin'ny fahita fahitalavitra, ny fotoana tsy hay hadinoina indrindra momba ny Total Divas dia nihodinkodina teo amin'ny tsy fitovian-kevitra teo amin'ny kintana tamin'ny fampisehoana, saika ny mpikamban'ny mpilalao rehetra no niditra an-tsehatra tamina laharana mafana farafahakeliny indray mandeha.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia andao hijery tohan-kevitra 10 avy amin'ny Total Divas izay mety tsy fantatrao.
# 10 Eva Marie sy ireo mpiara-miasa aminy Divas total (Total Divas Season 4)
Eva Marie dia niditra tamin'ny fifanakalozana ambaratonga ambiny tamin'ny sisa tamin'ny mpilalao Total Divas tamin'ny Andiany faha-4 an'ny andian-tantara.
Amin'izao fotoana izao, ny kintan'i WWE amin'ny ho avy dia mazàna miofana ao amin'ny Performance Center any Orlando, Florida mandritra ny fotoana maharitra alohan'ny hanaovana ny seho fahitalavitra voalohany any NXT.
Eva Marie, na izany aza, dia nanaporofo ny tsy fanarahana an'io lalàna io, satria niara-niasa tamin'ny mpanazatra manokana iray tany Los Angeles izy ary nanasongadina ihany koa ny toetra amam-panahy amin'ny RAW sy SmackDown.
Izany dia nipoitra tamin'ny fifandirana iray tamin'ireo mpiara-miasa aminy Total Divas, anisan'izany i Paige.
Heveriko fa mampihomehy ny tsy tokony hiverenanao any amin'ny NXT ary manana mpanazatra anao manokana any LA ianao kamo izany.
Namaly i Eva Marie tamin'ny filazany fa ny fizarana vehivavy an'ny WWE dia tokony hifanome hery, ka nahatonga an'i Brie Bella hanontany ny antony All Red everything dia nandefa hadalana tany amin'ireo mpiara-miasa aminy Total Divas tao amin'ny media sosialy.
Mipetraka eo ianao ary mijery ny masonay rehetra izay nanome ny zava-drehetra ho an'ity orinasa ity ary milaza fa mandrovitra anao izahay? Tsia, Eva Marie, manimba ny fizarazaranay ianao satria s ** k tanteraka amin'ny tolona.
Nofaranana tamin'ny fanesoesoana an'i Eva Marie tamin'ny filazany tamin'ireo mpiara-miasa aminy Total Divas fa mahafinaritra ny mandre izay nolazain'izy ireo. Avy eo, tao anaty tsikombakomba tsy dia hitanao akory ny nahatongavanao, niditra tamin'ny tifitra i Paul Heyman raha vao lasa i Eva!
tsy misy namana hiaraka
ahoana no ahafantarana ny bandy tia anao any am-piasana
ny fomba hampiarahana ny fiainako amin'ny 40